Vazimba Teratany Lumad Ao Filipina Miampanga Ny Fanararaotana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2015 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Español, bahasa Indonesia, English
Ireo mpitarika Lumad mitàna sorabaventy mitaky ny hiarovana ny vondrom-piarahamonin-dry zareo, tamin'ny fizoran'izy ireo ho any Manilla. Sary avy amin'ny pejy Facebook ST Exposure
Ny Oktobra 2015 teo, maherin'ny 700 ireo Lumad (vahoaka vazimba teratany avy ao Mindanao, nosy any atsimon'i Filipina) no nitety kilaometatra an'arivony ary nanao lasim-panoherana tao Manilla renivohitry ny firenena mba hitaky ny hanesorana ireo andian-tafika sy mpiambina ivelan'ny tafika tsy ho ao anatin'ny vondrom-piarahamoniny.
Nomena anarana hoe Manilakbayan 2015, ilay fitanjozoran'ny vahoaka koa dia mikatsaka ny fanohanan'ny rehetra mba hampitsaharana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny tafi-panjakana amin'ireo Lumad.
Nozarain'ilay vondrona mpikirakira media marolafy Southern Tagalog Exposure tao amin'ny Facebook ireo fijoroana vavolombelona avy amin'ny sasany tamin'ireo Lumad.
Nifanotofana ny tenifototra #StopLumadKillings (atsaharo ny famonoana Lumad) tao Filipina taorian’ilay vono olona mahatsiravina nanjo ny talen'ny sekolin'ny vondrom-piarahamonina Lumad, Emerito Samarca, sy Dionel Campos ary Bello Sinzo, mpitarika roa avy amin'ireo vazimba teratany, ny 1 Septambra 2015 lasa teo.
Ity no tena raharaha nisongadina indrindra tamin'izay antsoin'ireo mpikatrika mafàna fo hoe ezaka famoretana mitohy atao amin'ireo vahoaka vazimba ao Mindanao, anisan'izany ny fikendrena hamonoana ireo mpitarika azy, ny fanakatonana ireo sekolin'ny vazimba teratany, ary ny fibodoan'ny tafika ny tanindrazan-dry zareo.
Hazavain'ireo fikambanana Lumad fa lasibatra ry zareo noho ny fangatahan'ireo orinasa vaventy mpitrandraka harena ankibon'ny tany, fambolena, ary orinasa hafa mangetaheta haka ny tany feno otrikarenan'ny Lumad .
Ampangaina ihany koa ny tafika mitam-piadiana ao Filipina ho mamatsy ara-pitaovana sy manofana ireo mpiambina tsotra tsy avy amin'ny tafika mba hiady amin'ny fianakaviany ihany. Ny fametrahana tafika any anatin'ireo vondrom-piarahamonina vazimba teratany dia nitarika ho any amin'ny fanesorana faobe ireo Lumad an'arivony manerana an'i Mindanao.
Ireto fanambaràna fohifohy ireto , nangonin'i Southern Tagalog Exposure, no vavolombelon'ny fametrahana tafika tafahoatra any anaty vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany sy ny fandrobàna ny tany navelan'ny razan-dry zareo.
“Alaina ankeriny aminay ny tany navelan'ny razanay. Tianay hoesorina hiala any ireo miaramila ireo ary foanana ireo vondrona mpiambina tsotra mampizarazara ny laharanay Lumad. Te-hiaina anaty fandriampahalemana izahay.”
Bai Bibiaon Ligkaian Bigkal, Vehivavy Mpitolon'ny Tala-ingod, Davao del Norte
“Namono ny fokonay ny miaramila. Ny tombontsoany manokana no laharam-pahamehana ho an'ny governemanta sy ireo orinasa goavana, fa tsy ny tombontsoan'ny vahoaka. Tsy zava-dehbe ho azy ireo ny vahoaka. Rehefa miaro ny tanin'ny razanay sy ny kolontsainay izahay, dia ampangain'izy ireo ho mpikambana anatin'ny [vondrona mpihoko] Tafika Vaovaon'ny Vahoaka, mba ho entiny manamarina ireo fakàna ankeriny sy famonoana.”
Kaylo, Manobo avy any Talaingod, Davao del Norte
“Noho ny famoretana ataon'ny miaramila, voatery izahay miala sy mandao ny taninay. Sarotra izany nifindra toerana izany, miaraka amin'ny hafanàna sy ny tsy fisian'ny rano. Te-hiverina any amin'ny taninay izahay. Hatrany amin'ny fahazazàko. nivoady tamin'ny tenako hiady mandra-pahafatiko aho amin'ny maha-Lumad ahy.”
Krstina Lantao, Faritra Atsimon'i Mindanao
“Nopotehan'ny Tafik'i Filipina ny sekolinay. Nodoran'izy ireo ny kaoperativam-pambolenay. Niainako ny famonjàna ary ankehitriny miatrika fiampangana noforomporonina avy amin'izao zavatra rehetra izao hoe nanao fakàna ankeriny. Malahelo ny tanin'ny razanay izahay. Na aiza na aiza alehanay, mahatsapa fitiavana azy foana izahay. Io no naha-lehibe sy niainanay. Nalaina taminay izy io, ho faty miaraka amin'ny andian-taranaka hoavy ny kolontsainay .”
“Tonga teo amin'ny toerana misy anay ny angidimby an'ny tafika. Nodorany ny tranonay. Izay teny an-koditray ihany sisa no voavonjy. Araka ny lazain'ireo miaramila, tsy manana zo hianatra ny Lumad. Rehefa nitombo aho, ny ho mpampianatra no faniriako mba hanaporofoako aminy fa diso izy ireo.”
Kimkim Baliti, 13 taona Manobo, Talaingod, Davao del Norte
“”Tsy any anaty akata no hahafaty anay, fa noho ireo toerana fitrandrahana harena ankibon'ny tany manao tafo lanitra. Tokony ho isan'ireo voalohany misitraka ny harena avy amin'i Mindanao izahay. Lazain'ireo miaramila fa [vondrona mpihoko] Tafika Vaovaon'ny Vahoaka izahay mba hanamarinany ny famindràna toerana sy ny famonoana anay. Izy ireo no isan'ny tsy maintsy hiàla satria vahiny eto amin'ny tanin'ny razanay.”
“Zavadehibe ny anjara toeran'ireo vehivavy ao anatin'ny tolon'ny teratany Lumad. Ambony be ny fifanajànay samy izahay. Ilainay ny mivondrona miaro ny zonay amin'ny maha-olombelona sy ny tanin'ny razanay.”